Tingashandisa sei and injini
by pamusoro 18-05-29
And gwenya kuzvidzora chinhu zano kuti anodzora chinzvimbo, nokukurumidza uye torque ane zvokuimba tikachirega. It rakagadzirirwa inofamba kudzora dzemagetsi Motors. It ane otomatiki hutachiwana uye Chinyorwa kutanga uye zvokurega injini, uye kusarudzwa uye kuchinja kuti nokukurumidza. Also kutarisirwa Se ...
Experiment pamusoro and injini (A)
And Motors kazhinji kubva microprocessors kana tsika controller ICs, uye simba iri kazhinji nemauto matunhu dzakavhenekera and chinonzi motor mutyairi uye simba transistors. sangano chaiwo kunobvira, asi kunzwisisa kazhinji nyika and mudzidzi mu "zvichida rimwe zuva" remarara nhengo. Asi and ...
Experiment pamusoro and injini (B)
And injini inofamba matanho duku kazhinji akaratidza pamusoro Chikwata pamwero. Danho injini kuti kuruka mune imwe inoenda kuitika akapfuura kubudikidza coils, ipapo mumwe, ipapo rokutanga ichitenderera pamusoro pakatarisana polarity, ipapo yechipiri neizvi polarity, zvakare. kutevedzana iri kudzokororwa munenge ...